Walter Heyer's Transgender Regret Nyaya. | KUSVIRA
Pakutanga ndaive ne giddy yekutanga nyowani. Asi mahormone uye pabonde kunochinja genital kuvhiyiwa hakugone kugadzirisa zviri pasi zvinonetsa kufambisa wangu dysphoria.
Ndakatanga rwendo rwangu rweku transgender kunge mukomana ane makore 4 apo ambuya vangu vakaramba vachidaro, kwemakore akati wandei, akandipfekedza jira refu yakazara yepepuru yaakandiitira zvakanyanya uye akandiudza maitiro andaive ndiri musikana. Izvi zvakadyara mhodzi yekuvhiringidzika kwechikadzi uye zvakaita kuti ndichinje shanduko pazera 42 yekuchinja mukadzi.
Ndakagara sa "Laura" kwemakore masere, asi, sekuziva kwangu izvozvi, kushandura hakugadzirise marwere ari pasi.
Studies inoratidza kuti vanhu vazhinji vanoda kurarama sevakaroora vane vamwe nyaya dzepfungwa, sekushungurudzika kana kunetseka. Muchiitiko changu, ndakaonekwa ndiri zera 40 nezera rejysphoria uye pazera 50 nezvepfungwa zvepfungwa nekuda kwekunetseka kweudiki.
Pakupedzisira, vabereki vangu vakazviziva, uye kushanya kwangu kwandaisatarisira kuenda kumba kwasekuru kwakapera. Ndakafunga kuti chakavanzika changu chakachengeteka, asi babamunini vangu vachiri kuyaruka vakanzwa nezvazvo uye ndikanzwa ndiri mutambo wakanaka wekushora uye kushungurudzwa pabonde. Ini ndakanga ndisina kana 10 makore. Dai zvisiri zvekupfeka zvepepuru, ndinotenda ndingadai ndisina kushungurudzwa nababamunini.
Verenga zvimwe chirevo:
Wangu chikoro chepamusoro transgender imba yekugezera marongero anotyora kuvanzika kwevamwe vedu vese
Chikoro chepamusoro chaigona kuve gehena remwanakomana wangu transgender. Usaite kuti ive gehena kune inotevera mwana.
Kushungurudzwa ikoko kwakaita kuti ndisave ndoda kuva murume zvakare. Kupfeka-muchinjiso kwakandipa kupukunyuka. Ndakarara husiku, ndichikumbira kuna Mwari muchivande kuti andichinje. Mukufunga kwangu senge kwemwana, dai ndaingova musikana, ipapo ndaizogamuchirwa uye kusimbiswa nevakuru muhupenyu hwangu. Ndingadai ndakachengeteka.
Kuita sarudzo yekuchinja
Gender dysphoria ndeyekuzivikanwa, kwete kuita zvepabonde. Ini handina kumbobvira ngochani; Ini ndaifarira kufambidzana nevasikana. Munguva yangu yepakutanga ma20 uye ndakaroora kuroora, ndakaudza musikana wangu nezvekupfeka kwandaita. Iye akafungidzira kuti tinogona kuzvishandira. Takaroora uye takava nevana vaviri.
In wangu hupenyu hwebasa Ini ndakabudirira, asi musikana wacho akaramba achifunga zvandaifunga. Nekufamba kwevhiki kuenda kure kubva kumba, ndainzwa kupfeka zvipfeko zvechinjisa, zvichikurudzira chishuvo chekuva mukadzi.
Panguva yandakanga ndiri 40, ndakanga ndisingakwanise kutora kumanikidzwa kwehupenyu huviri hwakapatsanurwa. Ndainzwa kubvarikidzwa, ndichida kuve murume uye baba vakanaka, asi mukutambudzika kwakanyanya pamusoro pekuda kuva mukadzi.
Ini ndakatsvaga nyanzvi yepamusoro yeanhurume panguva iyoyo, Dr. Paul Walker, uyo aive akabvumirwa ari 1979 zviyero zvekutarisira yehutano hwe transgender. Akandiwanira chirwere chechirume chekuzivikanwa (izvozvi dysphoria) uye yakakurudzirwa kuyambuka-pabonde mahormone uye zvepabonde kuchinja genital kuvhiyiwa. Akandiudza kuti zviitiko zvehudiki zvaisaenderana nekutambudzika kwandinoita kwechikadzi, uye kuti kurara pabonde ndiyo chete mhinduro. Ndakatanga kutora mahormone echikadzi uye ndakaronga kuvhiyiwa kwaApril 1983 muTrinidad, Colorado. Ndakanga ndiri 42.
Imba yangu yakapera nguva pfupi ndisati ndambovhiya. Kuwedzera kune kuberekwa patsva, ini ndakaiswa mazamu uye mamwe maitiro echikadzi uye ndakachinja gwaro rangu rekuzvarwa kuva Laura Jensen, mukadzi. Kurota kwangu kwehudiki kwakazadziswa, uye hupenyu hwangu semukadzi hwakatanga.
Kutanga kutsva, zvobva zvaoma kudonha
Pakutanga, ndakanga ndakabatikana nemufaro. Zvaiita sekutanga kutsva. Ini ndaigona kumisikidza zvisungo nehupenyu hwangu hwekare saWalt ​​uye yangu yairwadza nguva yakapfuura. Asi chokwadi chakakurumidza kuitika. Vana vangu uye aimbova mukadzi akarwadziwa. Pandakaudza wandinoshandira, basa rangu rakapera.
SaLaura, ndakasarudza kutevera kuva chipangamazano uye ndikatanga zvidzidzo kuUniversiti yeCalifornia-Santa Cruz mukupedzisira 1980s. Ikoko, ganga mune rangu rakasikwa revakadzi rakasvinura rakavhurika, ndikatanga kusava nechokwadi neshanduko yangu.
Kutsiva kwandakawana kuburikidza nekuvhiya kwaingova kwenguva pfupi. Yakanga yakavanzwa pasi pemagadzirirwo uye zvipfeko zvechikadzi ndiye mukomana mudiki akakuvadzwa nekushungurudzika kweudiki. Ini ndange ndambo sangana nehurume dysphoria, asi panguva ino ndainzwa kunge murume mukati memuviri wakashandurwa kuita kunge mukadzi. Ini ndanga ndichirarama hope dzangu, asi zvakadaro ndakanga ndanyanya kuzviuraya.
Walt Heyer muPalm Desert, California, mu2009. (Mufananidzo: Mhuri kubatsirwa)
Nyanzvi yechikadzi yakandiudza kuti ndiipe nguva yakawanda. Makore masere akaratidzika senge nguva refu yaityisa kwandiri. Hapana chinhu chakafunga. Nei maHormoni akakurudzirwa uye kuvhiyiwa kwanga kusingashande? Sei ndakanga ndichiri kutambudzika pamusoro pehunhu hwangu hwechikadzi? Nei ndisina kufara kuva Laura? Sei ndaishuvira zvakanyanya kuva Walt zvakare?
Nechemumoyo, ini ndaive ndozvinetsa. Asi negwara uye kutsunga, uye nerudo nerutsigiro rwemhuri dzinoverengeka nevapi vezano, ndakatevera kurapa pachiyero chepfungwa. Neruzivo rwenyanzvi, ndakashinga kudzokorora kushungurudzika kwehudiki hwangu. Zvanga zvisiri nyore, asi yaive yega nzira yekugadzirisa mamiriro ezvinhu ari kutyaira mukadzi wangu dysphoria.
Ndakanga ndiri 50 pandakanga ndabviswa mazamu, asi makore mashoma akatevera akashandiswa mukuvhiringidzika uye kuraira. Mu1996, pazera re55, ndakazosununguka kubva pachishuvo chekugara semukadzi uye ndikachinja magwaro angu epamutemo kudzokera kuWalt, bonde rangu rechirume rakarongeka pabonde. Ndichine mavanga pachipfuva changu, zviyeuchidzo zvechisimba detour zvakanditorera 13 makore ehupenyu hwangu. Ndiri pahormone regimen yekuyedza kudzora hurongwa hwakashandurwa zvachose.
Pakupedzisira, ndakasangana nemukadzi anoshamisa asina hanya nekushandurwa kwemuviri wangu, uye isu takaroorwa kwemakore 21. Iye zvino isu tinobatsira vamwe vane hupenyu hwakasarudzika nekuchinja kwepabonde. Inoyerwa nerubatsiro rwevanhu kune hurikukuvadza vanhu, inzira inokosha yekushandisa nguva yedu.
Dai ndisina kutsauswa nenhau dzezvemitambo dzedzidziso yekuchinja pabonde "kubudirira" uye nevarapi vezvokurapa vakati shanduko ndiyo mhinduro kumatambudziko angu, ndingadai ndisina kutambura seni. Genetics haigoni kuchinjwa. Kunzwa, zvisinei, kunogona uye kunogona kuchinja. Pasi pezvinyorwa zvinowanzo dzikisa chishuvo chekutiza hupenyu hweumwe kuenda mune chimwe, uye ivo vanofanirwa kugadziriswa vasati vatora danho rakajeka rekuchinja.
Unonzwa vezvenhau vachiti, "kuzvidemba hazviwanzo." Asi havasi kuverenga inbox rangu, iro rizere nem meseji kubva kune transgender vanhu vanoda hupenyu nemuviri zvakatorwa izvo zvakatorwa kubva kwavari nemuchakabvu-sex mahormone, kuvhiya uye kurarama pasi pechiratidzo chitsva.
Mushure mekushanduka-shanduko, ini ndoziva chokwadi: Mahormone nekuvhiyiwa kunogona kushandura kuoneka, asi hapana chinoshandura chokwadi chisingachinjiki chebonde rako.
Walt Heyer aimbove mukadzi ane transgender anopa rutsigiro kune vamwe vanozvidemba shanduko yechikadzi DzeBondeChangeRegret.com. Iye ndiye munyori we "Trans Hupenyu Vanopona. "
Unogona kuverenga akasiyana maonero kubva kwedu Bhodhi Revanopa nevamwe vanyori pane Pfungwa yekumberi peji, pa Twitter @usatodayopinion uye nezvedu zuva nezuva Pfungwa dzetsamba. Kuti upindure pachikamu, tumira chirevo kune mavara@usatoday.com.